प्रचण्डको धम्कीबाट देउवाको होस-हवास उडेको अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी « Janata Times
प्रचण्डको धम्कीबाट देउवाको होस-हवास उडेको अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी
काठमाडौं, बैशाख २५ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चितवनको भरतपुरमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले छोरीलाई नजिताए गठबन्धन टुट्ने धम्की दिएकै भोलिपल्ट शेरबहादुर देउवाको बोली फेरिएको बताउनुभएको छ । पार्टी कार्यालय ललितपुरस्थित च्यासलमा आईतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीले दाहालको धम्कीकै भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका शेरबहादुर देउवाले काठमाडौंमा डराएको अभिव्यक्ति दिएको बताउनुभयो ।
‘रेणु दाहालको भोट माग्न देउवाजी भरतपुर जानुभो, भोट मागेर फर्किनुभो, काठमाडौं फर्किएर कतिसम्म भने प्रचण्डले रेणुलाई उठाएकै होइन, मैले नै उठाएको बोल्नुभो । चितवनमा धम्कीबाट कति डराउनुभएछ भन्ने भोलिपल्ट थुरथुर हुँदै दिएको वक्तव्यले देखाउँदैन ?’ ओलीले भन्नुभयो । चितवनमा आयोजित गठबन्धनको आमसभामा प्रचण्डले पुत्री रेणुलाई नजिताए गठबन्धन टुट्ने, जिताए आफू उत्साही भएर अहिलेको गठबन्धनलाई १५/२० वर्षसम्म निरन्तरता दिने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । अध्यक्ष ओलीले मतदातालाई धम्क्याउने, तर्साउने अभिव्यक्ति दिएर खुलेआम आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा पनि निर्वाचन आयोग चुप लागेर गठबन्धनको ढाल बनिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘मेरी छोरीलाई यदी खुरुखुरु भोट हालेर जिताउने हो भने म उत्साहित हुन्छु । त्यस्तो भयो भने गठबन्धन १५/२० वर्ष टिकाउन सक्छु । त्यो मेरो प्रतिबद्धता छ । छोरीलाई भोट दिनुपर्ने कुरा के हो भने उनलाई उत्साहित बनाउन । यो वास्तबमा अपराधिक गठबन्धन हो । भोट दिएन भने चाखौला पखौंला भन्ने । यो अत्यन्त हानिकारक कुरा हो । आचारसंहिता विपरितको कुरा हो, अराजनीतिक कुरा हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।
निर्वाचन आयोगले चुनावको प्रचारमा एउटा दलले अर्को दलको चुनाव चिन्ह् प्रयोग गर्न नपाउने, एउटा दलले अर्को दलको प्रचार गर्न नपाउने आचारसंहिता जारी गरे पनि गठबन्धनका नेताहरुको रक्षाकवच बनेर उनीहरुका तलका कार्यकर्ताहरुलाई मात्र धम्क्याइरहेको उदाहरणसमेत दिनुभयो ।
‘अहिले आयोगले फेरि भनेको छ, आफ्नो चिन्ह्बाहेक अरुको प्रयोग गर्न पाउँदैन । देशभरी त गठबन्धनले एउटाको चिन्ह अर्काले प्रयोग गरिरहेकै छ । एउटा दलले अर्को दलको प्रचार गर्न पाउँदैन भन्ने आचारसंहिता निर्वाचन आयोगले कार्यान्वयन गरोस् । शेरबहादुरजीले अर्को दलको भोट माग्न हुने ? तलका कार्यकर्ताहरुले नहुने ? नागरिक स्वतन्त्रता नेतालाई एउटा, कार्यकर्तालाई अर्को, केन्द्रकालाई एउटा, जिल्लाकालाई अर्को हुन्छ ?’ ओलीले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक दलभित्रको अनुशासनको विषय हुनसक्छ । तर निर्वाचन आयोग ढाल भनेर कार्यकर्ताहरुलाई कारवाही गरिन्छ भन्ने विषय के हो ? प्रचण्डजीले सिर्जनाजीको श्रीमती भन्न ठिक होइन भन्नुहुन्छ ? श्रीमती नभनौंला, उहाँको भोट त माग्नुभो नि त प्रचण्डजीले, अरुजीहरुले । चित्रबहादुरजी पनि लौरो टेकेर आइपुग्नुभएछ । अब उहाँहरुलाई के हुन्छ कारवाही ?’
उहाँले आयोगलाई गठबन्धनका नेताहरुलाई कारवाही गरेर निष्पक्षता कायम गर्न चुनौतिसमेत दिनुभयो । ‘उहाँहरुप्रति चाँही निर्वाच्न आयोग पट्टी बाँधेर, ढाल बनेर बस्ने ? प्रदेशप्रदेशमा संयुक्त आमसभा भइरहेको छ, पालिकापालिकामा गरेका छन, के हेरेको छ ? चेतावनी दिएर, पत्र लेखेर कारवाही गर्नुपर्यो नि ।’ ज्योतिषीका अनुसार वैशाख ३० गठबन्धनलाई ठूलो खड्गो